कहाँ छ सरकार ? यति सानो बालकलाई खान दिन नपाउँदा विक्षिप्त आमा धरधरी रोएर बेहाल (भिडियो हेर्नुस्) – Dailny NpNews
कहाँ छ सरकार ? यति सानो बालकलाई खान दिन नपाउँदा विक्षिप्त आमा धरधरी रोएर बेहाल (भिडियो हेर्नुस्)
प्रकाशित मिति: बिहिबार, जेठ १३, २०७८ समय: १६:२८:०८
काठमाडौ । महामारीका कारण लगाइएको निषेधाज्ञाका कारण दिनहुँ कमाएर भोक मेटाउने विपन्नहरुको जिवन निकै दुखद् छ । सरकारले महामारी फैलने क्रम रोक्न भन्दै निषेधाज्ञा थपिरहेको छ । तर विपन्न र दैनिक ज्यालादारी गरेर कमाउने र त्यसैले भोक मेटाउनेहरुका लागि भने प्रभावकारी कार्यक्रम छैन । जसका कारण उनीहरुको बिचल्ली भएको छ । विपन्न, सुत्केरी र अनाथहरुको बिचल्ली भएको हो ।
मजदुरहरुले काम गर्न पाएका छैनन् । जसका कारण उनीहरुको चुलो बल्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सामाजिक रुपमा लागेका अभियन्ताहरुले सहयोग गर्ने क्रम भने जारी छ । उनीहरुका कारण भोकै बस्नुपरेकाहरुले सडकमै खान पाएका छन् । धेरै सामाजिक अभियन्ताले घरमा बनाएका खाना सडकमा आएर विपन्नहरुलाई वितरण गर्ने गरेका हुन् ।
उनीहरुले गरेको सहयोगको खाना खान हजारौंको लाइन लाग्ने गरेका छन् । त्यसरी अरुले दिएको सहयोगको खानेकुरा खान आउनेहरु कतिपय धरधरी रोएको देखिन्छ । साना बालबालिका लिएर आएका महिलाहरुको अवस्था निकै दयनिय हुन्छ । पौष्टिक खानेकुरा खानुपर्ने समयमा भोकै बस्नुपरेका बालबालिकाहरुको अनुहार निकै मायालाग्दो देखिन्छ । तर उनीहरुका लागि सरकारले विशेष कार्यक्रम नल्याएको भन्दै आक्रोशित समेत हुने गरेका छन् ।
पोखराका रामराज कार्की ४२ वर्षको उमेरमा महामारीमा संक्रमित भएर निधन भयो । उनको १३ औं तिथिमा पठाएको पैसा र केही खाद्यान्न संचारकर्मी गंगा लामाले वितरण गरेकी हुन् । मनोज कार्की रामराजको दाईले सहयोग पठाएको गंगाले बताएकी छन् ।